Yenza iikhredithi ngeAdobe Premiere yeeprojekthi zakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yenza iikhredithi ngeAdobe Premiere iiprojekthi zakho zokumamela kubalulekile ukuba nawuphi na umhleli wevidiyo. Izihloko zeentengo zemboleko ziyinto ebalulekileyo nakweyiphi na iprojekthi yeaviovisual njengoko isibonisa lonke iqela elisemva kweprojekthi. Ukusuka elula ukuya kwiikhredithi ezinzima, izihloko zekhredithi ziye zavela ngokuhamba kwexesha, ukukwazi ukudibanisa iindlela ezininzi, ukufikelela iziphumo zokuyila. Kule posi siza kufunda yenza izihloko zekhredithi ngokukhawuleza kwaye ngokulula kakhulu Ukufumana iziphumo ezifanayo abazisebenzisayo kwinani elikhulu leefilimu kwi-cinema.
I-Adobe Premiere unamandla inkqubo yokuhlela esivumela ukuba senze inani elingenasiphelo lezinto xa uhlela ividiyo, ngokukhawuleza kakhulu phantse ngendlela ezenzekelayo kwimizuzu nje embalwa uya kuba nakho ukwenza ezinye iikhredithi zobungcali. Funda ukuyazi le nkqubo yokuhlela ividiyo ngakumbi enika iziphumo ezimnandi.
Kule posi siza kufunda ukuba uza kwenza njani yenza ezinye izihloko ukuhambisa ityala (Ingxangxasi) kusetyenziswa kuphela ukuchwetheza.
Into yokuqala esiyifunayo kukuba Uluhlu olunayo yonke idatha yamatyala, Nje ukuba le datha ilungele ukuba siqale ukusebenza INkulumbuso.
Sivula inkqubo ngefayile yethu yeaudio ekulungeleyo kwaye yenza umbala ongasemva wematte. Eli candelo lithe laguquguquka ngokuxhomekeke kwiimfuno zomntu ngamnye, esinokuzisebenzisa ividiyo yangasemva okanye ubeke umbala ocabaleleyo. Amaxesha amaninzi ividiyo encinci enezithonga zobuxoki zibekwa kwicala elinye ngelixa iikhredithi zidlula kwelinye icala.
. Emva kokwenza umbala we-matte, into elandelayo ekufuneka siyenzile yile yenza isihloko sokushukuma okungagqibekanga, koku siya kwimenyu ephezulu isihloko / isihloko esitsha / iscroll emiselweyo. Umhleli wokubhaliweyo we INkulumbuso Iyafana nawuphi na umhleli weAdobe, sinokutshintsha ifonti, ubungakanani, umbala, isitayile ... njl. Senza iiparameter zokuchwetheza ukuthanda kwethu.
Nje ukuba iitekisi zilungile, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuba nika intshukumo kwisicatshulwa, sikhetha ukhetho kwi Ukufuduswa ngaphakathi kwemenyu yokuhlela isicatshulwa. Kule bhokisi kufuneka siphawule ukhetho lokufuduka ukuze isicatshulwa sihambe, kufuneka siphawule ukhetho qala kwiscreen. Sinawo amanye amaxabiso anokuhlengahlengiswa ukuhambisa umfanekiso kunye nezinye iziphumo, sinokuzama ezi ndlela ukuba ziluncedo kwinto esiyifunayo.
Ngokutsho kwe ubude bexesha isihloko setekisi yethu kumgca wexesha, i zi khredithi ziya kuba ngaphezulu okanye ngaphantsi ubude kwaye ziya kuhamba ngesantya esiphezulu okanye esisezantsi. Ukuba iikhredithi zihlala ixesha elide isantya sabo siya kuba sezantsi, ukuba bahlala ixesha elingaphantsi isantya sabo siya kuba phezulu.
Sele sinayo yethu izihloko zekhredithi Ngalo naluphi na uhlobo lweprojekthi yeevidiyo. Inkqubo ilula kwaye iyakhawuleza, konke ekufuneka sikwenzile ngoku kukuziqhelanisa kunye nokuyila ukudala izimbo ezahlukeneyo usebenzisa le nkqubo inye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Yenza iikhredithi ngeAdobe yeNkulumbuso yeeprojekthi zakho zokumamela
Yintoni i-DPI? Ithetha ntoni iPPI? Yintoni isisombululo?